IMENYU YOKUTYA YOKUTYA YOMTSHATO WEOLIVE COUPLE IBANDAKANYA IHITI YASEBUSUKU - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Isibini esitshatileyo se-Olive Garden-Inspired Wedding siphela ngeLate-Night Breadstick Bar
Ukutya iOlive Garden ngokutya kunye neBreadstick Bar. (Ityala: UJeanne Sherman Photography)
Ngu: Knot 11/11/2019 ngo-12: 55 PM
Izonka ezingenasiphelo, isuphu kunye nesaladi konke kunye necala le-marinara? Oko amore. I-Olive Garden aficionados ezimbini zisandul 'ukutshata kwaye zabamba ipasika yokugqibela, igqityiwe nge-Olive Garden's imenyu yokutya yomtshato ukhetho olwenziweyo kwisidlo sokwamkela kwabo bobabini kwaye i-snack yabo yasebusuku.
Esi sibini, uSamantha Roberts noJeff Gilleland abasuka eGrand Rapids, eMichigan, baqala ukunxibelelana nothando lwabo lwamalungelo kwaye bazibandakanya ngoncedo lweOlive Garden ngo-2017. Ngeli xesha ekhulayo, uRoberts wayehlala esidla rhoqo kwindawo yokuhlala nosapho kunye naseGilleland. uhlakulele ukuthanda i-Olive Garden emva kokuhlala esiya kwindawo yakhe yezidlo zeqela lezemidlalo. (Ngapha koko, ukulayishwa kwe-carb kuyinyani ngaphambi komdlalo.) Zombini, ke ngoko kwaye ngokwendalo, zafumana intuthuzelo ngokuba nayo ubusuku bemini kwiOlive Garden.
Kwiminyaka emibini edlulileyo, uGilleland wagqiba ukufunda ngePasipoti yePasipoti yeOlive Garden eya e-Italiya, eyanika abalandeli abangama-50 abazinikeleyo ithuba lokuthenga konke okubandakanya, uhambo lweveki enye kwilizwe le-pasta kunye ne-pizza ezimbini. Iindleko zaziyi- $ 200 kuphela (kwaye beza nayo yonke into yokufikelela kwi-Olive Garden yonyaka), kodwa amathuba okuba loo nto ibincinci. Ngapha koko, ngaloo nyaka, abantu abangama-21,000 abathengayo bathenga iipasta kwiwebhusayithi yeOlive Garden ngomzuzu wokuqala.
Ngandlela thile, uGilleland wayephakathi kwabathengi abanethamsanqa abangama-50 abaphumeleleyo uhambo lobomi bonke. Ngelixa wayese-Italiya, wawuphakamisa lo mbuzo, kwaye inkxaso engagungqiyo yesi sibini kunye nokuthandeka kwe-Olive Garden kwade kwaboniswa xa babenothotho lokuzibandakanya ngomxholo kwiinyanga ezalandelayo. Kwakungokwemvelo ukuba i-franchise ekugqibeleni ingene kwaye inikeze into ekhethekileyo ngosuku lomtshato wesibini: imenyu yokutya yomtshato waseOlive Garden.
Iindwendwe zixakeke kuyo yonke into ukusuka kwipenne ukuya kwi-fettuccini njengenxalenye yemenyu yokutya yomtshato weOlive Garden. Nangona kunjalo, imenyu yasebusuku yesi sibini inokuba ingaphezulu lee kunaleyo yamkelweyo. Emva kokuphela komdaniso, iindwendwe zazinceda ibar yesonka , apho izibheno ezidumileyo zefranchise zanikwa uluhlu lweesosi zokuntywila.
Okokugqibela, iindwendwe zimnke kunye nomnyhadala weqela (ekunene-kumxholo kunye nawo wonke umtshato): Ipasta engapheliyo iya kudlula… uqikelele, i-Olive Garden.
Bona zonke iifoto ezingezantsi.
iikhabhathi ezimnyama ekhitshini
Izicatshulwa ezimfutshane kakhulu zothando kuye
ichibi lesitayile samachibi
indlela yokwenza ukuba umntu othandana naye akutshate
ndinganxiba izihlangu ezimdaka ngesuti emnyama
iingoma zokungena kwabazali kwimisitho yomtshato
ngubani oyena mntu ulungileyo